श्रीम'तीको मृ’'त्युको २४ घण्टामै श्रीमानको पनि मृ’' त्यु - Onlines Time
श्रीम’तीको मृ’’त्युको २४ घण्टामै श्रीमानको पनि मृ’’ त्यु
December 2, 2020 December 2, 2020 by onlinestime
मङ्गलबारे । श्रीमतीको मृ’त्यु भएको २४ घण्टा नबित्दै इलाममा श्रीमान्को पनि मृ’त्यु भएको छ । महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत डबलसिंह मगरको गए राति मृ’त्यु भएको हो । उहाँकी श्रीमती अम्बिकाको यही मङ्सिर १५ गते मृत्यु भएको थियो ।फाकफोकथुम गाउँपालिका–४ का मगर कोरोना पोजेटिभ भएपछि विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका उहाँको मङ्सिर ८ गते भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै आएको थियो । सोही दिन उहाँको स्बाव सङ्कलनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो ।
उपचाररत उहाँलाई मङ्सिर १३ गते भ्यान्टिलेटरबाट निकालिए पनि १५ गते श्वासप्रश्वासमा समस्या र धड्कन अनियन्त्रित भएपछि अस्पतालले श्रीमतीलाई जानकारी गराएको थियो अस्पतालबाट आफ्ना श्रीमानकाे खबर सुनेपछि अप्ठेरो महसुस गरेकी श्रीमतीलाई पनि उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउँदै गर्दा मृ’त्यु भएको बताइएको छ ।उपचाररत मगरको पहिले कोरोना स’ङ्क्र’मण पोजेटिभ थियो । यही मङ्सिर १५ गते पुनः गरिएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आइनसकेको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका स्रोत व्यक्ति विमल बरालले बताउनुभयो । श्रीमतीको हृदयाघातका कारण मृ’त्यु भएको बताइएको छ ।
यी हुन ३ राशी, हरेक क्षेत्रमा गर्छन् राज जीत्नकै लागि जन्मिएका !
काठमाडौँ यी हुन ३ राशी । हरेक व्यक्तिको सफलताको कारक भनेको नै ग्रह र राशी हो । हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने जो कोहीले आफ्नो राशीलाई विश्वास गर्ने गर्छन् । व्यक्तिको सफलता भाग्यसँग मात्रै जोडिएको नभएर दृढ संकल्प, अत्मविशवाससँग पनि जोडिने गर्छ।जन्म कुण्डलीमा वृहस्पति , मंगल र शनि शुभ स्थितीमा हुने व्यक्तिलाई कहिले पनि जीत मात्रै प्राप्त हुने कुरा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । हेरौँ कुन कुन हुन त ती राशीहरु ।
मेष : मेष राशी हुने व्यक्तिहरु अद्भूत क्षमताको धनि हुने गर्छन् । तेज दिमाग भएको आत्माविश्वासमा पनि अन्य राशी भन्दा अगाडी रहेका हुन्छन् । नेतृत्व गर्ने क्षमता प्रचुर मात्रामा रहेकाले ती व्यक्तिहरुले धेरै क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्ने गर्छन् । उनीहरु हदै सम्मको दुख गर्न पनि पछि हट्दैनन् । त्यसकारण हरेक क्षेत्रमा उनीहरुको जीत हुन्छ ।
धनु : धनु राशीलाई क्रान्तिकारी राशी पनि भनिन्छ । यो राशी भएका व्यक्तिहरु जीवनमा छुट्टै किसिमको अनुशासन अपनाउने गर्छन् । उनीहरुमा बल मात्रै नभएर एकीकृत गर्नमा पनि खप्पिस हुने गर्छन् । उनीहरु आफुमा आएको हरेक दुखलाई चिर्दै जीत हाँसिल गर्नमा अग्रसर रहेका हुन्छन् ।
मकर : मकर राही भएका व्यक्तिहरु हरेक प्रकारको प्रतिष्ठित सम्मान, धन वैभव मिल्ने गर्छ । हरेक सफलता आफ्नै प्रयासमा हात पर्न सक्ने प्रभावशाली हुन्छन् । अन्य व्यक्तिलाई छिट्टै प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएका यी व्यक्तिहरु सफलता पाउनको लागि जस्तोसुकै दुख र कष्ट गर्न पनि तयार हुन्छन् ।
Prevभ’र्खरै हेर्नुहोस्, प्रह”रीद्धारा काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्रा**उ, गर्जि’ए सभापति देउवा
Nextरचना रिमाल ठुलो तनावमा । टिकटकमा किन रुदै आईन् ? मु’द्धा हाल्छु भन्दा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस )